Mgbanwe ihu igwe na-arụ ugbu a n'ịbawanye ọnụ ọgụgụ nke allergies
Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Mgbanwe ihu igwe na-arụ ugbu a n'ịbawanye ọnụ ọgụgụ nke allergies
Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya na-eme ka ntinye aka nke mgbanwe ihu igwe na mmetọ ikuku na-ebute ọrịa nrịanrịa nke iku ume.
Mgbanwe ihu igwe, nke a na-egosipụta n'oke okpomọkụ, mmetọ na-emebi emebi, idei mmiri na-emebi emebi, na oké ọkọchị, na-emetụta ọtụtụ nde mmadụ n'ụwa nile. Mmụba nke ọnụ ọgụgụ nke ihe nfụkasị iku ume metụtara mmetọ dị ka ụkwara ume ọkụ, rhinitis, na ahụ ọkụ hay n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya nwere ike ịsị na ọ bụ mmetụta nke mgbanwe ihu igwe. Otú ọ dị, ọ bụ ezie na a mụọla mmetụta ndị mmadụ n'otu n'otu na-enwe na ịrị elu okpomọkụ na mmetọ ikuku na ọrịa nrịanrịa ndị a, nkọwa zuru ezu banyere otú ihe ndị a si emetụta ibe ha adịbeghị ugbu a.
Na ntụle e bipụtara na Chinese Medical Journal na 5 Julaị 2020, ndị nchọpụta achịkọtala mgbagwoju anya ka mgbanwe ihu igwe, mmetọ ikuku, na ihe ndị na-efe efe dị ka pollen na spores synergistically so na ọrịa iku ume. Ha na-atụle ka mgbanwe ihu igwe, gụnyere oke okpomọkụ, nwere ike isi metụta akụkụ iku ume ozugbo wee bute ọrịa nfụkasị ahụ. Na mgbakwunye, ha na-egosipụtakwa ọrụ nke ọdachi ndị na-emere onwe ha dị ka égbè eluigwe, idei mmiri, ọkụ ọhịa, na uzuzu na-amụba ọgbọ na nkesa nke allergens ikuku na ibelata ogo ikuku, si otú ahụ na-emetụta ahụike mmadụ. E gosipụtara nchịkọta akụkọ a na vidiyo na YouTube.
N'ozuzu, nyocha a na-adọ aka ná ntị megide ihe ize ndụ ahụike ka ukwuu n'ọdịnihu n'ihi mmeghari na mmeghari mmetụta nke okpomọkụ na ikuku na-ebute allergens na mmetọ ikuku. "Atụmatụ anyị na-egosi na ọkwa nke particulate ihe na ozone na ikuku ga-abawanye na ihu igwe na-ekpo ọkụ, na okpomọkụ na-arịwanye elu na ọkwa CO2 nwere ike ime ka ọkwa nke allergens nke ikuku na-ebuli elu, na-amụba ohere nke ọrịa nrịanrịa nke iku ume," ka Prof na-ekwu. Cun-Rui Huang, bụ́ onye duziri ọmụmụ ihe ahụ.
Ọnụ, akụkọ a na-eje ozi dị ka oku na-eme nyocha, mmepe, na mgbalị nkwado sitere n'aka ndị ọkachamara ahụike, na-atọ ntọala maka atụmatụ ahụike ọha na eze dị irè karị. “Usoro atụmatụ ime obodo dị mfe dị ka imepụta mpaghara nchekwa ikuku dị ala n'akụkụ ebe obibi, ịkụ osisi na-adịghị ahụ efe, na ịkwachaa ogige tupu ifuru nwere ike ibelata ikpughe nsi ma belata ihe egwu ahụike. Usoro nlekota na ịdọ aka ná ntị ihu igwe nwekwara ike inyere ndị ọchịchị aka ichebe ndị na-adịghị ike dị ka ndị bi n'ime ime obodo na ụmụaka site na ọrịa ndị dị otú ahụ," ka Prof. Huang na-akọwa, na-agbakwụnye na ụzọ dị otú ahụ ga-adị oké mkpa maka ibelata mmetụta ahụike nke ọrịa nrịanrịa nke iku ume n'ọdịnihu.
N'ezie, ọ dị mkpa ịgbakọ mbọ iji kwado ikike onye ọ bụla nke ikuru ikuku dị ọcha.
Ụzọ ọhụrụ iji gbochie mmetụta dị egwu nke ọgwụgwọ ọrịa cancer
Ahịa Basalt Fiber na-enweghị atụ, nkọwa zuru ezu...
Azụ ahịa akpa akpu, isi ihe dị mkpa...